Somalia: Madaxweynaha Soomaaliya Oo ku Dhawaaqey Go,Aano Cusub Iyo Abaabulo Cusub,,, - Wargane News
Home English News Somalia: Madaxweynaha Soomaaliya Oo ku Dhawaaqey Go,Aano Cusub Iyo Abaabulo Cusub,,,
War ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo booqasho rasmi ah ku joogay Itoobiya, ayaa lagu sheegay in safarkii uu halkaas ku joogey uu soo gaabiyey kadib dilkii Wasiirkiisi hawlaha Guud Cabbaas Siraaji.
Madaxweynaha ayaa ka tacsiyeeyey dilka Wasiirka waxaana uu sheegay in uu ahaa shakhsi aad u wanaagsan.
“….Cabbaas waxaa lagu yaqaanay waddaniyad, karti iyo hufnaan, waxa uuna naftiisa iyo waqtigiisa u huray dalkiisa iyo dadkiisa. Waxa uu ahaa shakhsi muhiim ah oo ka baxay qaranka Soomaaliyeed oo idil. Geeridiisa aad bey noo wada taabatay…..” ayuu yiri Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay in Dowladdu ay baaritaan rasmi ah ku samayneyso sida wax u dhaceen
“…Dowladda Soomaaliya waxay u xaqiijineysaa qoyska marxuumka iyo guud ahaan shacabkaba in baaritaan dhab ah lagu sameyn doono falkan. Cid walba oo ku lug yeelata waxaa la marsiin doonaa sharciga….”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo wafdiga la socda ee ku sugan magaalada Adis Ababa waxay soo gaabiyeen booqashadii ay halkan ku joogeen, waxayna maanta oo Khamiis ah dib ugu laaban doonaan magaalada Muqdisho si ay uga qeybgalaan aaska qaran ee loo sameynayo marxuumka.